mubvunzo A330 Mega Pack
1 gore 11 ago #232 by Numan28
Mhoro! Ini paIndaneti kuti A330-300-200 Package.
Asi hapana VC yangu Airlines A330-300:
Pane munhu angandibatsira here?
1 gore 11 ago #233 by Dariussssss
Pane shanduro mbiri ari pasuru, munhu chakaitwa POSKY, kuti munhu hauna VC. Another chakaitwa Thomas Ruth ane VC.
No kufunganya, kana zvose akagadzawo nemazvo, imi mune zvose.
Ngatizive kana pane zvimwe zvinetso.
1 gore 11 ago #235 by Numan28
Ndeupi wavo ndiye POSKY shanduro uye rinova Thomat Ruth shanduro?
1 gore 11 ago #238 by Dariussssss
Kana ukaenda kusarudza ndege, pane 3 donhwe-pasi mazita, kana menu: ndege mugadziri, muparidzi uye nendege mhando. Click on muparidzi, sarudza Thomas Ruth. Usanetseka kana ukaona Thomas Ruth-Luis Quintero, ndizvo zvimwechete.
Tariro iyi zvinobatsira.
1 gore 11 ago #239 by Numan28
Hakuna a330-300 kana 200 pamwe mutakurwi zvigaro uye VC?
1 gore 11 ago #242 by Dariussssss
hu .... hapana humbowo kuti, chaizvoizvo. Kufanana ndakati, A330 kubudikidza TR kunouya VC, asi zvine ane mufambi kabhini, chaizvoizvo havazivi. Ndine chete rongedza akagadzawo asi sezvo handina hanya kabhini, handina kutsvaga izvozvo.
1 gore 11 ago #243 by Numan28
Asi hapana A330-300 Thomas Rute kune vari posky shanduro, uye iwe akati kuti havana pasina VC
1 gore 11 ago #244 by Dariussssss
... o munhu .....
OK, tanga -give ini kubatana kuti ndege rongedza iwe paIndaneti
Chechipiri, ari kubva pano kana kumwewo?
Chechitatu, ko yakaiswa nemazvo?
Uyu ndiye ini: http: //www.rikoooo.com/downloads/viewdownload/6/799
uye iye zvino, munguva yangu FSX Ndine yakapenya A330-300 uye kumhanya. Saka, tipeiwo mamwe info.
1 gore 11 ago #245 by Gh0stRider203
Dariussssss akanyora: izvozvi, changu FSX Ndine yakapenya A330-300 uye kumhanya. Saka, tipeiwo mamwe info.
OK zvakanaka, ndiri pamusoro wako matanhatu ane F-14, sidewinders rakakiyiwa pana iwe kubva waita vakanzi utsinye chipfuro ..... I wapihwa kuti vanoenda-mberi pamoto kana kuti mumwe zvakaipa kufamba .....
1 gore 11 ago #246 by Dariussssss
Zvandakaita zvakaipa? Ini chaizvo zvandaigona kubatsira pano. Kana ini ndikati kana akaita chimwe chinhu chakaipa, I ruregerero nokuti, asi Handitombozivi kufunga zvandakaita.
Time chokusika peji: 0.338 mumasekonzi